Mayelana NATHI - GUODA (Tianjin) science and technology development Inc.
Onguchwepheshe bokwenza amabhayisikili nokuhweba, GUODA(Tianjin) isayensi nobuchwepheshe bokuthuthuka Inc. ikhiqiza zonke izinhlobo zamabhayisikili, kufaka phakathi ibhayisikili kagesi kanye nebhayisikili elinamasondo amathathu, isithuthuthu sikagesi kanye nesithuthuthu, izingane zebhayisikili nezinqola zabantwana, efuna ulwazi olungcono lokugibela empilweni yansuku zonke. Ngo-2007, sazibophezela ukuvula imboni yobungcweti yokwenza ibhayisikili likagesi. Ngo-2014, i-GUODA Inc. yasungulwa ngokusemthethweni eTianjin, idolobha elikhulu kunawo wonke lasechwebeni lokuhweba langaphandle eNyakatho neChina. Ku-2018, ikhuthazwe yi- "the Belt and Road Initiative" Ie "The Silk Road Economic Belt kanye ne-21st-Century Maritime Silk Road", i-GUODA (Africa) Limited yasungulwa ukuze ihlole kabanzi emakethe yamazwe omhlaba. Manje, imikhiqizo yethu izuza ukuthandwa okukhulu ekhaya nakwamanye amazwe.
Sifisa ukuba ngumlingani wakho webhizinisi othembekile futhi sakhe ikusasa eliqhakazile lokuwina-win!